डिएसपीको रगतले बच्यो सुत्केरीको ज्यान – Janata Times
डिएसपीको रगतले बच्यो सुत्केरीको ज्यान
प्युठान, असार २६
एक सुत्केरी महिलाको ज्यान जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्रकुमार कार्किले दिएको रगतले बचेको छ । व्यथाले च्यापेपछी जिल्ला अस्पतालमा भर्ना हुनुभएका प्युठान नगरपालिका–३ रातामाटाको ३८ बर्षिय कमला कुमाललाई डिएसपी कार्किले रगत दान गरेपछि सुत्केरीको ज्यान जोगिएको हो ।
अत्यधिक रक्तश्राव हुँदा सुत्केरीको ज्यान नै खतरामा परेको समयमा कार्कीले रगत दान गरी बचाउनुभएको हो । सुत्केरी महिलाको अहिले स्वास्थ अवस्था सामान्य रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । अहिलेसम्म २० पटक रक्तदान गरेको कार्कीको भनाई छ ।
Related tags : डिएसपीको रगतले बच्यो सुत्केरीको ज्यान
प्रहरी मुख्यालयमा किन पुगे प्रधानसेनापति थापा ?
झरीमा रुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा निस्कियो जुलुस : भारतको गुलाम नबन्न शीर्ष नेतालाई खवरदारी
कस्लाई खुशी पार्न गर्दैछौं ओलीबिरुद्ध मोर्चाबन्दी ?
सरकारले शुरु गर्यो विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार : कोमामा रहेका ढकाललाई स्वदेश ल्याइयो